သက်ဝေ: ရေပတ်လည် ဝိုင်းရံလျှက်ရှိသော ကုန်းမြေကို ကျွန်းဟု ခေါ်သည်
Posted by သက်ဝေ at 11:00 AM
P.Ti July 25, 2013 at 11:30 AM
ဖူးခက်က စားသောက်ဆိုင်တော်တော်များများ ဆိုင်ရှင်တွေက အဖြူတွေ ဆိုင်အလုပ်သမား မြန်မာတွေများတယ်။ မြန်မာတွေ အဲလောက်များတာ တွေ့တော့ အံ့တောင်သြတယ်။
ဖူးခက်က အပြင်ထွက်ပြီး ဖီဖီကျွန်းတွေဖက်သွားမှ ပိုလှတာ။ နောက်တစ်ခါသွားဖြစ်ရင အမလို သင်္ဘောအနှေးစီးပြီးသွားမယ်။
Thandar Lwin July 25, 2013 at 11:38 AM
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) July 25, 2013 at 12:10 PM
ဈေးဆိုင်မှာကိုယ့်မြန်မာအချင်းချင်း ဈေးလျှော့ပေး၊ ကူညီပေးတာလေးတွေ ဖတ်လိုက်ရတော့ မျက်ရည်တောင် လည်မိတယ်.. တကယ်
sosegado July 25, 2013 at 12:12 PM
ပျော်စရာခ၇ီးလေးဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ ဖန်တာစီ ကြည့်ခဲ့ရမှာ၊
ဂျစ်တူး ( မုံရွာ ) July 25, 2013 at 12:15 PM
မင်္ဂလာပါ အသက် ရေ
အတွ့ အကြုံတွေကိုခေါင်းထဲမှာမှတ်သွားရင်းနဲ့ 
ဖြူ July 25, 2013 at 9:26 PM
You are really professional photographer...
အပြင်မှာတွေ့ရင် ဖြူ့ကို ဓါတ်ပုံ တပုံလောက် ရိုက်ပေးပါလား...
တန်ခူး July 25, 2013 at 11:01 PM
အိမ်ကလူသွားတုန်းကပြောတယ်. မြန်မာတွေအများကြီးပဲလို့သက်ဝေရေးတာလေးဖတ် ဓာတ်ပုံလေးတွေကြည့်ပြီးပိုသွားချင်သွားတယ်
Dear Ma Thet Wai,
I love to read your blog, ma chit kyi aye, ma naing naing, Ko Di ko lar and all are blocking user now. I hope you wont do this.
When we went to Malaysia, most of the casher, waiters r burmese. They always reduce the price or sometimes gave extra drinks/ food for us. Burmese in Singapore dont have this habit. :P
မိုးငွေ့........ July 26, 2013 at 11:13 AM
မနေ့ကဖတ်ပြီး မန့်မရလို့ ခုပြန်လာတာပါ...း) ပုံလေးတွေအားလုံးလှတယ်... ကွေ့သယိုစားချင်တယ်အမ
ဖိုးတုတ် July 26, 2013 at 8:54 PM
Anonymous July 26, 2013 at 10:40 PM
နောက်တစ်ခေါက် ပြန်သွားချင်သေးသော ဖူးခက် :)
Ma Tint July 29, 2013 at 3:40 PM
အလည်တစ်ခေါက် အရောက်ပို့ပေးခဲ့တဲ့ မသက်ကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်လိုက်ပြီ...
ဓာတ်ပုံတွေပီပြင်ပြီး လှလိုက်တာ မသက်ရေ...
သက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရှင်တစ်ယောက်လိုပဲ (ကွတ်မှာသာနောက်တာနော် အခုအတည်ပြောတာ)
Unknown August 15, 2013 at 9:39 AM
hotel နာမည်လေးများ ပြောပြလို့ ရမလားဟင်?
လာမဲ့ CNY တွက်ကြို booking လုပ်ချင်တာ အဲလို beach နဲ့ဆက်နေတဲ့ hotel နေရာမျိုးဆို အဆင်ပြေလို့ပါ..